Jereo hoe inona ny fironana amin'ny jeans an'ny vehivavy amin'ny fahavaratra 2021 | Bezzia
Jereo hoe inona ny fironana amin'ny jeans an'ny vehivavy amin'ny fahavaratra 2021
Bezzia | | lamaody
Ny lamaody dia iray amin'ireo sehatra mavitrika indrindra misy. Isan-taona dia hitantsika ny fivoaran'ny fironana samihafa na ny fiverenany ary tsy azontsika atao ny tsy manaiky azy ireo. Raha misy akanjo miovaova sy mahaliana dia jeans. Tsy mila antony hividianana roa amin'izy ireo isika, satria zava-dehibe ny fanavaozana azy ireo sy ny fividianana jeans, toa ny Pataloha jeans Salsa Jeans, amin'ny alokaloka samihafa. Na izany aza, alohan'ny hanaovana izany dia zava-dehibe eritrereto hoe inona ny fironana lehibe ho an'ny pataloha jeans vehivavy amin'ity fahavaratra ity. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia te hanome fanazavana momba ireo izay tokony ho lamaody isika mandritra ny volana fahavaratra.
1 Ny vokany "patchword" dia iray amin'ireo tsy maintsy atao amin'ny jeans
2 Tapaho, ny filokana mampidi-doza vaovao
Ny vokany "patchword" dia iray amin'ireo tsy maintsy atao amin'ny jeans
Misy zavatra tsara kokoa noho ny manao pataloha jeans, T-shirt fototra ary kiraro baoty? Tsia, tsia, satria momba ilay izy iray amin'ireo fitambarana tsotsotra sy mahomby indrindra misy izany. Azontsika atao koa ny manao an'io safidy io amin'ny kilaoty fohy sy fohy nataon'i Salsa Jeans, fa misy fotoana toa ny mandeha miasa na mandeha misakafo hariva ilana pataloha lava.
Ny voaviravira sy tsy voahitsoka dia hitohy ho singa ifotony hanome fikitika matanjaka kokoa amin'ny fombantsika. Manokana indrindra, ny pataloha jeans miendrika malalaka miendrika rotra amin'ny lohalika no tena miteraka hatezerana.
Etsy ankilany, lojika raha zatra sigara isika. Mahatsiaro ho tsara izy ireo ary manampy amin'ny famolavolana ny endritsika ihany koa. Na eo aza izany dia miala tsiny izahay milaza fa ny vanin-taona mafana dia modely jeans mavesatra no anaovana. Amin'izao fomba izao, dia manolo-tena mafy amin'ny fampiononana mandositra ny fanerena ny kambana aminay rehefa manao sigara.
Tapaho, ny filokana mampidi-doza vaovao
Ny fironana iray hafa izay mamely indrindra indrindra amin'ireo influencer dia fantatra amin'ny anarana hoe "tapaka". Na dia toa sangisangy aza izy ireo, dia jeans ireto izay nesorina tamin'ny lamba ny haavon'ny fehikibo mba hampisehoana ny hoditra. Filokana mampidi-doza izay tsy sahy afa-tsy ho an'ny sahy indrindra.
Iza no nilaza fa ny manga fotsiny dia tokony ho manga amin'ny lokony rehetra? Tamin'ity taona ity dia nilaozanay io hevitra io mba hanomezana lalana ny lokony amin'ny jeans. Ny toetr'andro tsara dia mamporisika anao hitafy akanjo vaovao sy vaovao miaraka amin'ny feo falifaly. Amin'ity tranga ity, miloka amin'ny bubblegum mavokely, beige mazava na mavo voasarimakirana ianao.
Ny vokatra iray izay maka ny feed Instagram an'ny olo-malaza maro dia ny "patchwork". Ny fombany dia mitovy amin'ny an'ny sisa tavela izay nampidirina mba hiteraka fifanoherana eo amin'ny lamba samy hafa. Volavolan-doko roa izay iray amin'ny malaza indrindra ankehitriny.
Farany, tsy afaka tsy niraharaha fironana maharitra izahay. Orinasa maro, satria fantany fa ny fanamboarana pataloha dia mitaky rano mihoatra ny 3.000 litatra ary 75 hampihena azy ireo, dia naniry ny hampiseho ny lafiny tsara indrindra aminy miaraka amin'ny tontolo iainana. Noho io antony io dia enjehina ny lamba manaja kokoa, ary koa ny fizotry ny famokarana maharitra. Etsy ankilany, lasa malaza ny fampiasana landihazo voajanahary.
Ankehitriny rehefa fantatsika ny fironana hanjakazakan'ny jeans amin'ity fahavaratra ity dia tonga ny fotoana to review izay pataloha avy amin'ny fitafiantsika mitafy azy ireo. Raha tsy izany dia tonga ny fotoana ahazoana ny iray amin'izy ireo hanome tendrony kanto, hafa ary kanto amin'ny akanjontsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Jereo hoe inona ny fironana amin'ny jeans an'ny vehivavy amin'ny fahavaratra 2021
Salady Chickpea sy karaoty
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny tena fitiavana?